Igwefoto zoro ezo: Otu esi achọta ha n'ime ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ na ime ụlọ na-agbanwe agbanwe - OMG Solutions
Zoro Ezo Zoro Ezo: Otu esi achọta ha n'ime ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ yana inggbanwe Ọha
Igwefoto zoro ezo n'ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ na ụlọ ọha na-agbanwe agbanwe na-abụ nnukwu nsogbu n'ụwa. A na-ebugo vidiyo ndị a na-enweghị ihe ọ bụla gbasara ndị ọ metụtara wee bụrụ ihe kpatara ibibi ndụ ha. Dabere na isi mmalite 80% ndị ihe nkiri porn ndị amamịghe bụ ụmụ nwanyị, na nso nso a na South Korea, ndị mmadụ na-eme ngagharị iwe na-ekwu "Ndụ m abụghị nke porn gị". N'otu aka ahụ, onye ọrụ Starbucks hụrụ igwefoto micro kegidere n'okpuru ala mkpuchi ụlọ mposi na Allen Park. N'ihi nke a ndị mmadụ na-eche echiche ma na-achọ ụzọ ịchọta igwefoto zoro ezo na nzuzo ha. Ndị a bụ ụzọ iji chọta igwefoto zoro ezo n'ime ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ na ụlọ ndị na-agbanwe ọha na ihe ị ga-eme mgbe ịchọtara ya.
Ezubere igwefoto zoro ezo zoro ezo zoo na ebe, ọ siri ike ịchọpụta na agbanyeghị Chọọ n'ebe ndị a ebe enwere ike zoo igwefoto ngwa ngwa dịka,
Ndị na - eme nyocha
Ewezuga ebe a na - ahụkarị maka ihe ndị dị ka wires na - eduga na ebe ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ dị mma nke nwere ike inye onye na - eme ihe gị ohere ịchọrọ ile ụlọ ahụ anya.
N'ime oghere anyị dị ka ime ụlọ ịwụ, ụlọ ihi ụra na ọkachasị n'ọnụ ụlọ na-agbanwe ọha, anyị na-ahụ enyo enyo, ebe anyị nwere ahụ iru ala ma nwee ntụkwasị obi itinye aka na ọrụ nkeonwe. Agbanyeghị, ihe omume na-egosi na ọtụtụ oge etinye igwefoto n'akụkụ nke ọzọ nke enyo. Ugbu a ajụjụ na-ebilite otu anyị nwere ike isi jide n'aka na enyo ahụ enweghị igwefoto. Nzọụkwụ mbụ bụ ilele enyo bụ ụzọ abụọ ma ọ bụ na ọ bụghị. Maka nke ahụ tinye mkpịsị aka gị na enyo ahụ ma ọ bụrụ na enwere oghere dị n'etiti mkpịsị aka gị na enyo ahụ, yabụ enyo abụghị ụzọ abụọ. Nke pụtara na igwefoto anaghị ezo ebe ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mkpịsị aka aka aka na-aka nke pụtara enyo bụ ụzọ abụọ ma enwere ike ịnwe igwefoto zoro n'azụ enyo ahụ.
N’agbanyeghi otu onye isi gị si nọrọ n’iru igwefoto zoro ezo, mana a ga-enwe oghere maka oghere igwefoto ka ịdekọ ihe omume gị. Gbanyụọ ọkụ gị n’ime ụlọ ma nwaa ọkụ n ’ọkụ. Imirikiti igwefoto zoro ezo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ nke na-acha ọbara ọbara nke ga-achapụ ma ọ bụ na-enwu mgbe ọkụ metụtara oghere ya.
Jiri Spy Camera bug Detector (SPY995):
Ngwaọrụ a bu ihe ohuru ohuru nke na enyere gi aka ichota udiri magnetik, igwefoto WIFI ma obu igwefoto zoro ezo na waya. Ọ dị mfe iji ma nwee nnukwu nchọpụta nchọpụta. O nwekwara obere ihuenyo na-egosi ike nke mgbama a ka ị na-agagharị na igwefoto zoro ezo ikike mgbama ahụ ga-abawanye na ihuenyo ahụ. Kpachara anya gbanyụọ ngwaọrụ niile nke na-akpọsa mgbama redio tupu i jiri ihe nchọta igwefoto Spy a.
I nwekwara ike iji ekwentị gị chọta igwefoto zoro ezo n'ime ime ụlọ gị, ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ ụlọ mgbanwe ọha na eze. Kpọọ enyi gị wee bido jiri nwayọ na-ege ntị ma olu enyi gị na-egbochi ma ọ bụ na-anaghị ada. Ọ bụrụ na etinye igwefoto zoro ezo na ebe ndị a, ugboro ole ọ ga - eme mkpọtụ na oku gị mgbe nke ahụ pụtara na oku gị belata oku ma gbalịa inyocha ebe ahụ. Wayzọ ọzọ nwere ike ịbụ ịgbanye igwefoto azụ nke ama gị ma gbalịa ịhụ isi iyi nke ọkụ ma ọ bụ ọkụ nke na-atụghị anya ya nke nwere ike iduga igwefoto zoro ezo.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịchọta igwefoto zoro ezo:
Enwere ohere dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-eso usoro ndị a dị n'elu, ị ga-ahụ igwefoto zoro ezo ma ọ bụrụ na etinye ya na oghere nkeonwe gị. Yabụ, ihe ị ga - eme. Nke mbu, ozugbo ịchọtara igwefoto zoro ezo anaghị emetụ ya aka ma ọ bụ megharị ya n'ihi na ọ nwere ike ibute mkpịsị aka onye a na-enyo enyo. Nke abuo, wepu ngwongwo gi site na igwe onyonyo wee kpoo ndi uwe ojii obodo na ndi okacha amara ka ha nyochaa okwu a.
Nzuzo 14426 1 Echiche Taa